Wayyaaneen TPLF if Gaaguuruuf Funyoo(Haada) Hidhataa Jirti | QEERROO
Wayyaaneen TPLF if Gaaguuruuf Funyoo(Haada) Hidhataa Jirti
Posted on November 22, 2017 by Qeerroo
“Galgalli Harree Waraabessa” jedha Oromoon. Harreen utaaltes, guluftes gaafas Waraabessa baatus du’a ooltii? Duutummoo Waraabuu foonessuu dhiisaa? Kanumaaf uummanni keenya mammaake.
Waa malee hinjenne. Amma biyya keessa jiraannu keessatti cunqursaan saba keenya Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii irratti daran jabaatee jira. Cunqursaa sana ofirraa kaasuuf yeeroo uummanni waloodhaan gaara garbummaa dhiibu argaa jirra. Gaarri uummata jala dhaabataa? Gaarri uummataan dhiibamu jiguu hinafu. Qabsoon uummanni keenya humna afaan qawwee guutuutti hidhatee sochoo’u faana gochaa jiru qabsoo jabduudha. Galma nii ga’a. Nii injifanna!
Qabsoo kanaan hidda Wayyaanee kukkutee muka jabaa Tigiroonni abdattu TPLF gogksuutti jirra. Mukti gammoojjii saaramee fayyaa? Mukti Tigirootaa kunis haa badan fayyuu hindanda’u. Gogee golgolaa’uunsaa dhiyoodha. Amma baala buusuuf daandii qabeera. Gogee akka dhabamu shakkii hinqabnu. Uummanni keenya jabaa kan ofiin jedhee addunyaa raasuuf abbalaa ture sochoosuurra tortorse. Daraaraa garbummaa kutaa jira. Garbummaa biyyattii keessatti daraaraa jiru kun yeroo dhiyootti cita. Daraaraan cite firii hingodhatu.
Qabsoo uummata Oromoo galii isaa hankaaksuuf shirri wayyaaneen shiraa turteef qawween ishees dabballoonnishees dadhabaa jiru. Fala jabaa itti gargaaramaa turte
Keessaa Hidhaa, Ajjeechaa fi doorsisa ture. Ilmaan Oromoo kitilaan lakkaa’amanis ilkaan wayyaaneen nyaatamanii ajjeefamaniiru. Duuti qabsaa’ota haqaa garuu madaa bal’ise, booree wal horsiise; Wal hormaanni booree kutannoo uummataa dabale; kutannoon uummaatammoo garbummaa hongeessuuf adeeme. Amma carraa dhumaa qarqara hallayyaa itti Wayyaanee gatuu sanarra dhaabbatee jira Oromoon. Wayyaanee kana hallayyaa cinaan gahanii imimmaan isheef watwaannaa isheef har’aa garaa laafnee kan darbachuu dhiifnu taanan nii bayyanatti. Bayyanatteen immoo uummataa akka hinille beekamaadha. Kanaaf bayyanachiisuurra golgoleessuu, dhabamsiisuun deebii keessaa hinilaalamnedha.
Waan maraan yaaliin qabsoo dadhabsiisuu xaxamaa tureera ittis jira. Xaxaa sana damdamatee Oromoon qabsoo gadjabeessee taasise. Duula halagaan itti bante mara irra aanuuf kutannoo isaan bahee qabsoo jabaa taasise. Qabsoo gochaa jirru kana galmaan gahuuf du’aaf hidhaan, reebichi arrabni ayyaan laallattootaaf dabballoota wayyaanee akka duuba hindeebifne raagesse. Raagaa sanarra dhaabbatanii akka gaararraa bifa jijjiirrachuun jalqabe. Bifa jijjiirrannaan Wayyaanee kan uummata Oromoo dadhabsiisu akka hintaane ammas himuufiin barbaada.
Wayyaaneen ofumaan of waraanuun ishee gaafa nagaa ajjeeftee, nagaa hiite ture. Kana cinatti uummata xuqan malee nama hinxuqne Oromoo irratti kallattiin Waraana dhaabdee waggoota dheeraa gaafa irra sirbite eeboon of waraante. Waraansi isheen of waraante ishee tortore. Amma fooliin du’aa du’aa jedhuyyuu utuu jira ofiin jettuu funyaan qabsaa’otaa rukutaa jira. Waraansa of waraanteen damdamachuu akka hindandeenye waan hedduun argaa jirti. Kanaaf funyoon of hudhuu akka wayyuuf of keessatti waadaa waan ofiin galte fakkaata.
Funyoo Oromoo ittiin gaaguruuf qophaa’aa jirutu jira. Funyoon kun carraa lama fuudhee deema. Yookan wayyaane isa hidhee Mooyyee jala dhaabe fuudhee addunyaa kanarraa darba. Yoo dammaquu baannemmoo Oromoo gaaguruu mala. Haa ta’uu malee Funyoon wayyaaneen hidhaa jirtu akka ishee lubbuun dabarsu hubatuun barbaachisaadha. Funyoon kun maalii?
Funyoon uummata Oromoo gaaguruuf hidhamaa jiru maqaa “Foollee” jedhamuun adeemaa jira. Akkasuma maqaa ayyaan laallattoota qabsoo uummataatti utuu karaa deemanii itti goranii qabatee adeemaa jira.
1, Funyoon maqaa “foollee” kan abbaan gadaa ijaareen alatti caasaawwan basaasaa mootummaa wayyaaneetu ijaaramaa jira. Caasaawwan kunneen waajjiirri mataa mataatti aanaa mara keessatti dhaabbataafii jira. Jaroonni maqaa foolleen ijaaraman kunneen qabsaa’ota fakkaatanii qabsaa’ota funaanuuf muuxannoo fudhataa jiru. “Fira fakkaatee Cululleen allaattii nyaata” jedha Oromoon.
Jaroonni kunneen eenyu akka qabsoo gaggeessaa jiru addaan baasu. Caasaa Qeerroo Bilisummaa tohachuudha. Caasaa kana gaafa bira gahan immoo harka mootummaa Wayyaaneetti dabarsanii kennuudha. Ta’us akeeka kana fashalsuun funyoo hidhamaa jiru kana Wayyaaneef taasisuun akka hinolle himuun fedha.
2,Maqaa ayyaan laallattoota qabsoo Oromootti warra karaa utuu deemu gore dura qabanii uummata gaadi’uu. Funyoon kun kanneen activistummaa ofiin ofii laatanii biyyaaf biyya alaa keessaa wacaa oolanii qabata. Maqaa jarreen kanaa uummata dura qabuun dabballoonni Wayyaanee isaantu galuuf jedha, caasaa abalutii, caasaa abaluutii hogganummaa irra isin teesifna kottaa! jechuun qabsaa’ota haqaa addaan dhimbiibuuf hidhamaa jira. Funyoon kun hedduu dhokattuudha. Haala kanaan akka argaa jirrutti aanaaleef gandoota Oromiyaa keessatti caasaan haaraan wayyaaneedhaan ijaaramaa jira. Caasaan kunneen adeemsa keessa balaarra akka buufamaniif isaanuman akka boodarra qabuuf jedhanis dhagaa’aa jirra. Maqaa qabsaa’ootaa warra maxxanfatee adeemu qabatee dhufuullee mala. Kanaaf kana duras dhaabbachuun barbaachisaadha.
Waan ta’eef yoo irratti dammaqne Wayyaaneen Of Waraanuurratti Of Gaaguuruuf Funyoo Hidhataa Jirti. Mooyyees of jala keessseetti jala dhiituun gaaguruu qofatu nu hafa. Yoo dammaquu baanne bayyanachiisuu malla.